FANATANJAHANTENA : Hakatona ao anatin’ny telo volana ny kianja Rrasolonjatovo
Manomboka ny faha-09 janoary 2017 izao no hikatona ny kianja Rasolonjatovo ary tsy hisokatra raha tsy any amin’ny volana marsa any ho any. 7 janvier 2017
Mba ho fikajiana ny kianja Rasolonjatovo no antony hanakatonana azy ary ahafahana mikolokolo azy ihany koa, hoy ny tompon’andraikitra.
Efa fanao isan-taona ny fanakatonana tahaka izao ahafahan’ny tompon’andraikitra mikarakara azy io saingy somary nampitomboina kely ny fotoana hikatonany tamin’ity taona ity noho ny fahitana fa tsy mahazo aina mihitsy ny bozaka ao amin’ity kianja ity.
Isan’ny fanirian’ny rehetra ny hampiharana ny fanapahan-kevitry ny komity nitantana azy io fahiny ny amin’ny hoe tsy azo andraisana zavatra hafa ankoatra ny lalao baolina kitra sy izay mifanentana amin’izany ny kianja mba tsy hahasimba azy. Ny fetim-pirenena ihany no fety azo raisina ao amin’io kianja io raha ny fanapahan-kevitry ny komity tamin’izany no jerena. Kianjam-bahoaka anefa ity kianja ity satria ny vahoakan’ Ambatondrazaka no nanamboatra azy sy nanarina azy taorian’ny fahasimbana nianjady taminy.